Ugbo na-ereputa ndị na-eweta ngwa ọrụ na ụlọ ọrụ - China Farming Manufacturers Manufacturers
Mmiri Tine Ripper N'ihi traktọ 3 Point Ripper Farm Cultivator
Ngwaahịa zuru ezu tizụlite ọrụ: n'oge uto nke ihe ọkụkụ na ogbo seedling, weeding, ala loosening ma ọ bụ ala ịkọ na-emekarị rụrụ n'etiti ahịrị nke seedlings. Ebumnuche nke ịkọ ihe bụ iwepụ ahịhịa, chekwaa mmiri, kọọ ala maka nchekwa okpomọkụ, kwalite ire ere nke ihe ndị metụtara ahịhịa, na imepụta ọnọdụ dị mma maka uto na mmepe. Erụ igwe bụ ụdị akụrụngwa akụrụngwa eji arụ ala, ahịhịa na ịkọ ala ...
Product Ihe 3Z usoro diski ụdị ridger na-bụ-eji n'ọhịa nduku, na akwukwo nri. Ha nwere njirimara nke ogologo ịgba ịnyịnya ígwè, mgbanwe nkuku dị mma, ọtụtụ nkwado na mgbatị siri ike. Elu àgwà 65 manganese mmiri ígwè efere na-eji na diski koo. Mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ, ike bụ 38-46 HRC, ezi ekwedo na ike, ezi ala ntinye arụmọrụ, ala mbịne, ekpuchi àgwà nwere ike izute oru chọrọ nke ugbo pr ...
Ugbo ugbo-mmejuputa ulo oru ugbo ala
Ihe omuma ihe omuma a bu ihe kwesiri ime ya na oru ya bu nke na adighi nma maka okporo uzo di iche iche na ugbo ala. Ka ihe atụ, 2-ton trailer na-tumadi onwem na 12-25 HP traktọ, na breeki nwere ike nkukota breeki, n'ibu breeki ma ọ bụ ikuku breeki. Nhọrọ nke aka ekpe na aka nri ma ọ bụ nkwụsị atọ. Dị mpempe akwụkwọ: efere ụta na-agbanwe. Ctiondị traction: tripod ndụ traction. Ọgwụgwọ: nnukwu ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ iji kpochapụ nrụgide ịgbado ọkụ, ịchụpụ, deoxidizing, antir ...
Ọrụ ugbo Rotary Tillers
Ngwaahịa zuru ezu A na-akpọkwa onye na-agbanwe agbanwe nke nwere ezé na-agbanwe agbanwe dị ka akụkụ ndị na-arụ ọrụ. Dịka nhazi nke axis rotary axis, enwere ike kee ya na ụdị axis kwụ ọtọ na ụdị axis kwụ ọtọ. A na-ejikarị eriri axis rotary tilis na axis agụba agụba. Nhazi ọkwa nwere ikike dị ike nke ịzọpịa ala. Otu ọrụ nwere ike ime ka ala mebie nke ọma, ala na fatịlaịza agwakọtara nke ọma, na ọkwa ala, nke nwere ike imezu ihe achọrọ ...
Product Ihe 3S usoro subsoiler bụ tumadi adabara subsoiling na ubi nke nduku, agwa, owu na ike imebi n'elu n'ala obi tara mmiri, esighi ike ala na dị ọcha ahịhịa. Ọ nwere uru nke kemeghi omimi, dịgasị iche iche nke itinye, adaba nkwusioru na na. Subsoiling bụ ụdị nke na tillage technology nke e dechara site na Nchikota subsoiling igwe na traktọ ike n'elu ikpo okwu. Ọ bụ a ọhụrụ tillage usoro na subsoiling shọvelụ, wallless koo ma ọ bụ chizulu plọ t ...
Farm Mejuputa Disc koo ubi maka Ahịa
Nkọwa ngwaahịa A na-edepụta plow iji rụọ ọrụ na ụdị ala niile maka ọrụ ndị dị mkpa dị ka nkwụsị ala, ịzụlite ala, ntụgharị ala na ịgwakọta ala. A na - eji ya mepee ubi ohuru ma hazie ebe okwute. Enwere ike iji ya ngwa ngwa na okwute ma gbanye mgbọrọgwụ. Nka na ụzụ nkọwapụta Nka na ụzụ 1LYQ-320 1LYQ-420 PDP-2 PDP-3 PDP-4 Na-arụ ọrụ obosara mm 600 800 500 800 1000 Na-arụ ọrụ omimi mm 200 200 250-300 250-300 250-300 Disc diamita ...
Ngwaahịa akụrụngwa na-akọkarị igwe eji arụ ọrụ, ịtọghe ala, imebi ma sie ike n'elu ala, na-akọ ala ma na-agba ịnyịnya n'oge oge uto nke ihe ubi, ma ọ bụ mezue arụmọrụ ndị a dị n'elu ma mepụta njikọta na otu oge, gụnyere onye na-akọ ihe n'ụzọ zuru ezu, onye na-azụ n'ahịrị na ndị ọkachamara pụrụ iche. A na-eji ihe ọkụkụ zuru ezu eme ihe maka akwa akwa nkwadebe tinyere nkwadebe tupu ịgha mkpụrụ, ndị ọrụ ...
Nkọwa ngwaahịa Usoro 1BQX Light-duty Disc Harrow dị mma maka ihichapụ ma na-atọghe clods mgbe ịkọ na maka ịhazi ala tupu ịgha mkpụrụ na ala azụ. Igwe ndị ahụ nwere ike ịme ka ala na fatịlaịza gwakọta, ma kpochapụ ogwe osisi nke ọkụ na ala ma ọ bụ ala ọkara na ịkwadebe akwa mkpụrụ maka ịkọ ihe. The usoro Light-oru Disc Harrow etiti na-mere nke ruru eru ígwè tube, Ha owuwu ndị dị mfe na ezi uche, ike na inogide, adaba iji rụọ ọrụ, mfe ...
Ngwaahịa nkọwa 1BJX ọkara sized diski harrow kwesịrị ekwesị maka ndinuak na atọghe ala nkanka mgbe cultivation na ala na-akwadebe tupu agha. Ọ nwere ike ịgwakọta ala na fatịlaịza na ala a zụrụ azụ ma wepụ stumps osisi. Ngwaahịa a nwere usoro ezi uche dị na ya, ike siri ike, na-adịgide adịgide, ọrụ dị mfe, mmezi dị mfe, ma nwee ike ịkụpịa ma chụba n'ime ala iji mee ka ala ahụ dị larịị, ndị a na-egbo mkpa nke ọrụ ugbo kpụ ọkụ n'ọnụ. Ihe nke diski bu 6 ...